site ha na 21-03-18
Ka ọ dị ugbu a, ntiwapụ ahụ na mpaghara Hebei agafeela ma ndị mmadụ alaghachila na ndụ nkịtị kwa ụbọchị. Otú ọ dị, n'ihi mkpuchi, ụfọdụ mpaghara ka kwesịrị igosi akwụkwọ nyocha na-adịghị mma nke ụbọchị 7 ma ọ bụ ụbọchị 14 maka Covid-19. Anyị factory ịmaliteghachi nkịtị mmepụta na-arụ ọrụ. Anyị na-anabata gị ...
China jidere The Canton Fair n'ịntanetị na June
site ha na 20-06-24
Premier Li Keqiang duziri nzukọ ndị isi nke Council Council na Eprel 7, na nzaghachi maka ọnọdụ dị egwu nke ọrịa zuru ụwa ọnụ, nzukọ ahụ kpebiri na a ga-eme 127th Canton Fair na ntanetị na etiti etiti June. Ihe ngosi Canton bu otu n’ime uzo mbu iji buru ebe ...
A ndu banyere otu esi eme n'usoro?
site ha na 20-05-27
1. Mbụ Biko gwa anyị aha ngwaahịa ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnweghị aha ị nwere ike izitere anyị eserese, ma ọ bụ ị nwere ike ịlele weebụsaịtị anyị iji chọta ngwaahịa ịchọrọ. 2. Nye zuru ezu size maka ngwaahịa na ị chọrọ? Waya Okpukpo: eriri nlele / dayameta; na ngwugwu: ibu, otú ọtụtụ kilo maka otu c ...
Fọdụ na-ahụ maka mgbochi na njikwa COVID-19
Ugbu a Corona-virus na-agbasa n'ụwa niile. N'oge na-adịbeghị anya anyị na-enweta ọtụtụ akụkọ sitere n'aka ndị ahịa banyere ọnọdụ nke mba ha. Anyị maara ụfọdụ n'ime gị na-echegbu onwe gị banyere nje ahụ. N'oge gara aga, anyị nwetara otu ihe ị na-ahụ ugbu a. Anyị chọrọ ịkọrọ gị ahụmịhe gị ab ...
Denye aha na Akwụkwọ Akụkọ anyị
na soshal midia anyị
Liusu Industrial Park, Dingzhou City Hebei Province
Fọdụ ahụmahụ na COVID-19 igbochi ihe ...